प्रचण्ड भन्छन् : सरकारले सकेन, अब म गर्छु महामा’री निय’न्त्रण । – Yuwa Aawaj
जेठ ७, २०७८ शुक्रबार 415
काठमाडौ : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब आफूले महामा’री निय’न्त्रणको अगुवाई गर्ने बताएका छन् ।
उनले महामा’री निय’न्त्रण गर्न गठित सरकारी संयन्त्र खारेजीको समेत माग गरेका छन् । ‘ नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा केन्द्रीय को’भिड निय’न्त्रण इकाई बनाउने नि’र्णय गरेको छ ।
स्थायी कमिटि बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । एक स्थायी कमिटि सदस्यका अनुसार अब सरकारको भरोसा नरहेकाले माओवादीले नेतृ’त्व लिन चाहेको हो । यस्तो कमिटिलाई स्थानीय स्तरसम्म बिस्तार गरिनेछ ।
एक जना स्थायी कमिटि सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले गो’र्खामा ब्यस्त छन् । प्रचण्डको कमा’ण्डमा केन्द्रीय कोभिड निय’न्त्रण इकाई बनाउने, सदस्य संख्या भने श्रेष्ठ लगायतका नेतासँग सरसल्लाह गरेर ।
टुंग्या’उने र संख्या सकेसम्म सानो बनाउने निर्णय भएको ती सदस्यले जानकारी दिए ।पार्टी श्रोतका अनुसार यस अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहसम्म को’भिड इकाई रहने छन् । प्रदेशमा भने पार्टीका प्रदेश इन्चा’र्जले त्यसको नेतृ’त्व गर्ने छन् ।
बैठकले त्यस्तो युनिट पाँच दिनभित्र बनाइ सक्न पार्टी कमिटी मा सर्कुलर पठाउने नि’र्णय गरेको छ । सरकार कोरोना निय’न्त्रण मा असफल भएको र कमिसन तन्त्रमा फसेको नि’ष्कर्ष निकाल्दै सीसीएमसी खारेजको माग समेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Prevप्रधानमन्त्री ओलीद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको प्रस्ताव ।
Nextबधाई ! नेपालमा आज एकैदिन ७८९० जनाले जिते को’रोनालाई ।
तत्काल उडान खुल्ने आस मर्यो ! अब जुन १ तारिख मात्र खुल्ने आयो सुचना !